Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO oo ka Xogwaramaya Dagaaladii ugu Dambeeyey
Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO oo ka Xogwaramaya Dagaaladii ugu Dambeeyey
Wararkii ugu dambeeyay een ka helnay Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya dagaallo meela kala duwan oo dalka ka mid ah ka dhacay. Dagaalada aan warbixintooda helnay ayaa cadawga lagu gaadhsiiya khasaare laxaadleh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dagaaladan waxaa kujira howlgal ay CWXO ugu tala galeen 15 augost oo ah maalanta la aas’aasay JWXO.
Dagaalada oo meela kala duwan oo Ogadenia ah ka socda ayaa kuwa aan helnay faahfaahintooda u dhacay sidan;
15/8/14 Duleedka woqooyi ee Dagmada Fiiq kamiin ay CWXO kaxidheen waxay ku gubeen 1 baabuur oo nooca uuraalka ah waxaana kubasbeelay dhamaan wixii saaraa.
15/8/14 Duleedka koonfureed ee dagmada Fiiq kamiin ay CWXO ka xidheen waxay kugubeen 1 baabuur oo nooca ay ciidamada gumaysigu adeegsadaan ah.
15/8/14 Yaxoob oo Dagmada Fiiq ee xarunta Gobolka Nogob katirsan weerar mir ah oo ay CWXO ku qaadeen waxay ku burburiyeen fadhiisin ay ciidamada gumaysigu halkaas ku lahaayeen waxayna ugu gaysteen khasaare aan la faahfaahinin.
15/8/14 Hagu oo Fiiq katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 1 askari 1 kalana waa lagaga dhaawacay.
15/8/14 Xamaro oo Gobolka Nogob katirsan mir habeenimo oo ay CWXO ku qaadeen ciidanka cadawga waxay ugu gaysteen khasaare aan wali la faahfaahinin.
16/8/14 Garloogube oo Gobolka Doollo katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 3 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
17/8/14 Dagmada Wardheer ee xarunta Gobolka Doollo weerar habeenimo oo ay CWXO kuqaadeen ciidamada wayaanaha waxay kaga dileen 9 askari 11 kalana way kaga dhaawaceen.
17/8/14 Duleedka Dagmada Wardheer kamiin ay CWXO kaxidheen waxay kugubeen 1 baabuur oo ay ku bakhtiyeen 9 kamid ah ciidanka cadawga 6 kalana waxaa kasoo gaadhay dhaawacyo halis ah.
12/8/14 Sanxaskule oo dagmada Dhagaxmadow katirsan askari gadooday oo ciidanka gumaysiga Itoobiya katirsan ayaa rasaas kufulay 9 kamid ah ciidanka cadawga oo meel kuqayilaysay waxaana goobta kunaf waayay 9kii askariba waxayna kala ahaayeen 2 shiihalaqe 3 shambal iyo 4 kamid ah maamulka ciidanka gumaysiga. Isla goobta waxaa lagu toogtay askarigii gadoodsanaa ee falkan fuliyay.
14/8/14 Jeerinka oo Fiiq katirsan waxaa kagoostay 4 askari oo ciidanka cadawga kamid ahaa.
Todobaadkan aan kujiro waxaa goostay 40 kamid ah ciidanka Hawaarinta gaar ahaan kuwa ilaalada u ah Ina Ilay.